Yaanyuur - Wikipedia
Cat poster 2.jpg
Bisad, Mukulaal, Yaanyuur ama Basho (Felis silvestris catus) waa xayawaan yar oo gurijoogto ah, taas oo cunta hilibka, caanaha iyo cuntoda kale ee dadku karsadaan.
Mukulaasha waxeyna ka tirsan Bahda Bisada, sida: shabeelka, guduudanaha, libaaxa iyo harimacadka.
bisadu waa xayawaan aad u degen oo maskiin ah. Sidoo kale waxay ka mid tahay xayawaanka naasleyda ah ee ilmaheeda nuujiya.
bisada, waxeey ku nooshahay, aduunka oo dhan.
Bisadda (Felis catus) waa nooc ka mid ah xayawaannada yaryar ee dugaagga cuna. Waa noolaha kaliya ee la dhaqdo ee ka tirsan qoyska Felidae waxaana badanaa loo yaqaan bisadda guriga si looga garto xubnaha duurjoogta ah ee qoyska. Bisadu waxay noqon kartaa bisad guri, bisad beer ama bisad bahal; kan dambe ayaa si xur ah u socda oo iska ilaaliya xiriirka aadanaha. Bisadaha guryaha waxaa lagu qiimeeyaa bini-aadamka wehelnimo iyo awooddooda ugaarsiga jiirka. Qiyaastii 60 nooc oo bisado ah ayaa laga aqoonsan yahay diiwaan gelinno bisado oo kala duwan.
Bisadu waxay la mid tahay anatomy-ka noocyada kale ee jilicsan: waxay leedahay jidh jilicsan oo xoog badan, falcelin deg deg ah, ilko fiiqan iyo ciddiyo laaban karo oo loogu talagalay inay disho ugaadhsiga yar. Aragtidiisa habeennimo iyo dareenkeeda ur ayaa si wanaagsan loo horumariyay. Wada xiriirida bisadaha waxaa ka mid ah codbixinta sida meowing, purring, trilling, yesis, baroor iyo ciil iyo waliba luuqad gaar ah oo bisad gaar ah. Waa ugaarsade keli ah laakiin nooc jinsiyeed ah. Waxay maqli kartaa dhawaqyo aad u daallan ama aad ugu badan soo noqnoqoshada dhagaha aadanaha, sida kuwa ay sameeyaan jiirarka iyo xayawaannada kale ee yaryar. Waa ugaadhsade ugu firfircoon waaga iyo makhribka. Waxay qarsoon tahay oo aragtaa hemoono.
Bisadaha dhedigga ah ee dhedigga ah waxay yeelan karaan kittens laga bilaabo gu'ga illaa dhammaadka dayrta, cabbirka qashinku inta badan wuxuu u dhexeeyaa laba illaa shan yar. Bisadaha guryuhu waa la dhaqaa oo lagu muujiyaa dhacdooyinka sida bisadaha ku diiwaangashan, hiwaayad loo yaqaanno bisadda. Ku guuldareysiga xakameynta taranka ee bisadaha xayawaanka iyadoo la adeegsanayo xoqida iyo xoqida, iyo sidoo kale ka tagida xayawaanka rabaayadeed, waxay sababtay tiro badan oo ah bisadaha bahalka ah ee adduunka oo dhan, taasoo gacan ka geysatay baabi'inta dhamaan shimbiraha, xayawaanka, iyo xayawaanka xamaaratada ah, iyo kicinta xakamaynta dadka.
Bisadaha waxaa markii ugu horreysay lagu dhaqaaley Bariga Dhexe illaa 7500 BCE. Waxaa muddo dheer laga fikiray in daaqsinta bisadu laga bilaabay Masar hore, maadaama ilaa 3100 BCE qadarin la siiyay bisadaha Masar hore. Laga soo bilaabo 2017, bisadda gurigu waxay ahayd xayawaanka labaad ee ugu caansan Maraykanka, oo leh 95 milyan oo bisado ah. Boqortooyada Ingiriiska gudaheeda, qiyaastii 7.3 milyan oo bisadood ayaa ku noolaa in ka badan 4.8 milyan oo qoys ilaa sanadka 2019.
Etymology iyo magac bixinta
Ugaadhsiga iyo quudinta
Saamaynta ay ku leedahay duurjoogta
7 Cimriga iyo caafimaadka
Bisadaha baqdinta leh
La dhaqanka dadka
Cudurrada laga qaado bisadaha dadka
Taariikhda iyo quraafaadka
Khuraafaadka iyo cibaadooyinka
Asalka ereyga Ingriiska ee 'bisad', Old English catt, waxaa loo maleynayaa inuu yahay ereyga Laatiin dambe ee cattus, oo markii ugu horreysay la adeegsaday bilowgii qarnigii 6aad. Waxaa la soo jeediyay in erayga 'cattus' uu ka soo jeedo horudhac Masri ah oo ah Coptic ϣ ⲁⲩ šau, "tomcat", ama qaabkiisa dhedig ee lagu cabiray -t. Ereyga Laatiin dambe waxaa sidoo kale loo maleynayaa inuu ka soo jeedo afafka Afro-Aasiya. Ereyga Nubia ee kaddîska "wildcat" iyo Nobiin kadīs waa ilo ama garasho macquul ah. Ereyga Nuubiyanku wuxuu noqon karaa amaah laga soo qaatay Carabiga قَطّ qaṭṭ ~ قِطّ qiṭṭ. Waxay u egtahay "si isku mid ah inay foomamku ka soo qaadan karaan erey Jarmal ah oo qadiimi ah, oo laga keenay Laatiinka kadibna halkaas looga keeni karo Giriig iyo Syriac iyo Carabi". Ereyga waxaa laga soo qaadan karaa luqadaha Jarmalka iyo Waqooyiga Yurub, aakhirkana laga amaahdo Uralic, cf. Waqooyiga Sami gáđfi, "dumarka dumarka ah", iyo Hangool haggy, "istaat"; laga soo qaatay Proto-Uralic * käďwä, "dhedig (oo xayawaan dhogor leh)".
Tuugada Ingiriisiga, oo loo kordhiyay sida loo yaqaan 'pussycat' iyo 'pussycat', waxaa lagu caddeeyay qarnigii 16aad waxaana laga yaabaa in laga keenay poes-ka Dutch ama laga keenay Low German puuskatte, oo la xiriira kattepus iswiidhish ah, ama norweji malag, pusekatt. Foomam la mid ah ayaa ka jira Lithuanian puižė iyo Irish puisín ama puiscín. Asalka eraygan lama yaqaan, laakiin waxaa laga yaabaa inuu si fudud uga dhashay dhawaaq loo adeegsaday inuu soo jiito bisad.
Bisad lab ah waxaa lagu magacaabaa tom ama tomcat (ama gib, haddii la dheefsamo) Dumarka aan la baarin waxaa loo yaqaan boqorad, gaar ahaan marka la eego bisadda taranka. Bisad dhalinyaro ah waxaa loo yaqaan 'bisad'. Ingiriisigii Hore ee Casriga ahaa, erayga bisad ayaa la isku beddeli karay iyo ereyga hadda duugoobay ee bisadda. Koox bisado ah ayaa lagu tilmaami karaa inay yihiin qolo ama wax dhalaalaya.
Magaca cilmiyaysan Felis catus waxaa soo jeediyay Carl Linnaeus sanadkii 1758 bisad guri. Felis catus domesticus waxaa soo jeediyay Johann Christian Polycarp Erxleben sanadkii 1777. Felis daemon oo uu soo jeediyay Konstantin Alekseevich Satunin sanadkii 1904 wuxuu ahaa bisad madow oo ka timid Transcaucasus, markii dambena loo aqoonsaday bisad guri.
Sannadkii 2003, Guddiga Caalamiga ah ee Magacaabista Xayawaanku wuxuu xukumay in bisadda guryuhu ay tahay noocyo kala duwan, kuwaas oo ah Felis catus. Sannadkii 2007, waxaa loo tixgeliyey noocyo ka mid ah duurjoogta Yurub, F. silvestris catus, ka dib natiijooyinka cilmi-baarista jirka.   Sannadkii 2017, IUCN Cat Classification Taskforce waxay raacday talobixinta ICZN ee ku saabsan bisadda guryaha sida nooc ka duwan, Felis catus.
Evolution Maqaalka ugu weyn: Is-beddelka bisadda
Qalfoofka bisad duurjoogta ah (bidix kore), guri-guri (midigta kore), iyo isugeyn udhaxeysa labada (hoose) Bisadda guryuhu waa xubin ka mid ah Felidae, oo ah qoys awoowe u wada ahaa abid 10-15 milyan oo sano ka hor. Jinsiga Felis wuxuu ka leexday Felidae qiyaastii 6-7 milyan oo sano ka hor. Natiijooyinka cilmi-baarista jirka waxay xaqiijineysaa in noocyada duurjoogta ee Felis ay ku kala bexeen iyada oo loo marayo takhasus gaar ah oo loo yaqaan 'sympatric or parapatric takhasus leh, halka bisadda guryaha ka soo baxdaa lagu soo xulay xulasho macmal ah. Bisadda la dhaqay iyo awoowgeeda ugu dhow duurjoogta labaduba waa nafleyda dublamaasiga ah ee leh 38 koromosoom ku dhowaad 20,000 hiddo. Bisadda shabeellada (Prionailurus bengalensis) waxaa si madax-bannaan loogu daaweyey Shiinaha qiyaastii 5500 BCE. Khadkan bisadaha qayb ahaan la dhaqay wax raad ah kuma reebayo dadka ku nool bisadaha maanta.
Sidoo kale eeg: Evolution bisada la dhaqay
Bisad ku cunaysa kalluun kursi hoostiisa, mural ku yaal xabaal Masaari ah oo ku taal qarnigii 15aad ee BCE Tilmaanta ugu horreysa ee loo yaqaan 'taming' ee duurjoogta Afrika (F. Maaddaama aysan jirin wax caddeyn ah oo ku saabsan xoolaha nool ee ku nool Qubrus, dadka deggan tuuladan Neolithic waxay u badan tahay inay bisadda iyo xayawaanno kale oo duurjoog ah ka keeneen jasiiradda iyagoo ka yimid dhul-weynaha Bariga Dhexe. Sidaa darteed saynisyahannadu waxay u maleynayaan in duurjoogta Afrika ay soo jiiteen jiirka jiirka, gaar ahaan jiirka guriga (Mus musulus), oo ay ku barbaariyeen beeraleyda Neolithic degsiimooyinkii hore ee aadanaha ee Bisha Cas. Xiriirkan bilowga ah ee u dhexeeya beeraleydii hore iyo bisadaha ladaadiyey wuxuu socdey kumanaan sano. Markii ay faafinayeen dhaqamada beeraha, ayaa sidoo kale ay u bislaadeen bisaduhu. Digaagdii duurjoogta ahayd ee Masar ayaa waqti dambe ka qayb qaatay hidda-wadaha hidda wadaha ee bisadda guriga. Caddaynta ugu horreysa ee la ogsoon yahay ee ku saabsan bisadda guryaha ee Griiga waxay taariikhdeedu ahayd ilaa 1200 BCE. Ganacsatada Giriigga, Foosiya, Carthaginian iyo Etruscan waxay bisadaha koonfurta Yurub u soo bandhigeen bisadaha guryaha. Intii lagu gudajiray Boqortooyadii Roomaanka waxaa lagu baray Corsica iyo Sardinia kahor bilawgii Millennium-ka 1aad. Qarnigii 5aad BCE ka hor, waxay ahaayeen xayawaan caan ku ah agagaaraha degsiimooyinka Magna Graecia iyo Etruria. Dhamaadkii boqortooyadii Roomaanka qarnigii 5-aad, abtirsiinyaha bisadaha ee reer Masar waxay yimaadeen dekedda Badda Baltic ee waqooyiga Jarmalka.
Intii lagu guda jiray daaqsinta, bisaduhu waxay soo mareen isbedello yar yar oo ku saabsan qaabdhismeedka jirka iyo dabeecadda, welina waxay awood u leeyihiin inay ku noolaadaan duurka. Dhowr dabeecadood oo dabiici ah iyo astaamo lagu garto bisadaha duurjoogta ah ayaa laga yaabaa inay hore ugu sii habeeyeen iyaga oo ah gurijoog ahaan. Sifooyinkaas waxaa ka mid ah cabirkooda yar, dabeecadda bulshada, luuqadda jirka oo muuqata, jacaylka ciyaarta iyo caqli aad u sarreeya. Bisadaha Leopardus ee la haysto ayaa sidoo kale laga yaabaa inay soo bandhigaan dabeecad kalgacal leh oo xagga aadanaha ah, laakiin lama soo saarin. Bisadaha guriga badanaa waxay la shiraan bisadaha feeraha, iyagoo soo saaraya isugeyn sida bisadda Kellas ee Scotland. Isku-darka u dhexeeya guryaha iyo noocyada kale ee Felinae sidoo kale waa suurtagal.
Kobcinta taranka bisadu waxay bilaabantay badhtamihii qarnigii 19aad. Falanqeyn ku saabsan hiddo sidaha bisadaha guryaha ayaa shaaca ka qaaday in hiddo-wadeyaasha duurjoogta ee asaasiga ah ay si weyn wax uga beddeleen geeddi-socodka guri-ku-noolaanshaha, maadaama isbeddello gaar ah loo xushay si loo horumariyo taranka bisadaha. Noocyada badankood waxaa lagu aasaasay bisadaha guryaha lagu kala sooco. Kala duwanaanta hidde-wadaha ee noocyadan ayaa ku kala duwan gobollada, waana kuwa ugu hooseeya dadka asalka ah, taas oo muujineysa in ka badan 20 xanuunno hidde-wadayaal ah.
Astaamaha Maqaalka ugu muhiimsan: anatomy cat Cabir
Jaantus ku saabsan anatomy guud ee bisadda guriga lab Bisadda guriga joogta waxay leedahay dhakad yar iyo lafo ka gaaban tan duugga ah ee reer Yurub. Celcelis ahaan qiyaastii waa 46 cm (18 inji) oo dherer madax-ilaa-jir ah iyo 23-25 ​​cm (9-10 inji) oo dherer ah, oo qiyaastii ah 30 cm (12 in) dabo dhaadheer. Ragga ayaa ka weyn dumarka. Bisadaha waaweyn ee guryaha sida caadiga ah culeyskoodu wuxuu u dhexeeyaa 4 ilaa 5 kg (9 iyo 11 rodol).
Qalfoof ama laflafo
Bisaduhu waxay leeyihiin toddobo ilmagaleenka afka ilmagaleenka (sida naasleyda badankood u sameeyaan); 13 lafdhabarta wadnaha (aadanaha ayaa leh 12); toddobada lafdhabarta lumbar (bini'aadamku waxay leeyihiin shan); saddex xaraf oo xarago leh (sida naasleyda badankood u sameeyaan, laakiin aadanuhu wuxuu leeyahay shan); iyo tiro isbadal ah oo lafdhabarta dabada ah (bini aadamku waxay leeyihiin kaliya cawal vertebrae vestigial, fused into a coccyx). Waxaa ku dhegan lafdhabarta 13 feeraha, garabka, iyo miskaha. 16 Si ka duwan gacmaha aadanaha, bayaannada hore ee bisadu waxay ku dhegan yihiin garabka iyadoo ay lafaha xajmigu yahay mid lacag la'aan ah oo u oggolaanaya inay jidhkooda ku dhex maraan meel kasta oo ay u galaan waxay ku habboonaan kartaa madaxooda.
Qalfoof bisad Dhakta bisadu waa wax aan caadi ahayn oo ka dhex jirta xayawaannada leh haysashada il-qabadyo aad u waaweyn iyo daan ku takhasusay oo xoog leh. Markay ka adkaato ugaadhkeeda, bisad waxay soo gudbisaa qaniinyo qoorta ah labadeeda ilkood ee dhaadheer, kana dhex gelisa inta u dhexeysa labada lafood ee ugaarsiga waxayna kala goysaa xudunta lafdhabarkeeda, taasoo keenta curyaannimo iyo geeri aan laga soo kaban karin. Marka loo barbardhigo xayawaanada kale, bisadaha guryaha ku jira ayaa si ciriiri ah u dhexeeya ilkaha canineega marka loo eego cabirka daamankooda, taas oo ah laqabsashada ugaadha ay doorbido ee jiirka yar yar, ee leh laf-dhabarta yar. Qaybaha hore iyo kan ugu horreeya waxay wadaagaan lammaanaha carnassial ee ku yaal dhinac kasta oo afka ah, oo si wax ku ool ah hilibka ugu jajabiya qaybo yaryar, sida labo maqas. Kuwani waa kuwo muhiim u ah quudinta, maadaama bisadaha yar yar ee bisaduhu aysan si habsami leh u calalin karin cuntada, bisaduhuna inta badan ma awoodo inay mastasato. lakabka dhaldhalaalka, candhuufta oo waxyeello yar, yareynta haynta cunnada ka dhexeysa ilkaha, iyo cunnada inta badan aan lahayn sonkorta, hase yeeshee mararka qaarkood waxay ku dhacaan ilkaha oo mararka qaarkood lumiya iyo infekshan. ”
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yaanyuur&oldid=236325"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Juun 2022, marka ee eheed 16:27.